Antsirabe: Ambohimpihaonan’ireo mpitsabo ny aretina mivadi-tongotra
jeudi, 19 avril 2018 08:21
Tontosaina mandritra ny 3 andro eto Antsirabe, izay nanomboka ny alarobia 18 avrily 2018 ny fihaonam-be iraisam-pirenena ataon’ny AMPR-Mada na ny « Association Médecine Physique et Réadaptation de Madagascar », izay hihaonan’ireo mpitsabo manokana misahana ny fitsaboana ireny tongotra mivadika na bingo ireny na ny « Pied bot » izany.
Manampahaizana maro avy amin’ny lafivalo no mikaon-doha eto Antsirabe, ka arahina fanofanana izany, mba ahafahana misoroka sy mitsabo haingana ireo zaza vao teraka ka tratry ity fivilanana amin’ny tongotra ity, satria nambaran’ny tompon’andraikitra fa amin’izy mbola kely dia azo averina amin’ny laoniny izany.
Olana ho an’ity tranga ity moa ny halafon’ny fitsaboana sy famerenana izany ka isan’ny niadian-kevitra niaraka tamin’ny solontenan’ny Minisiteran’ny fahasalamana tao izany. Raha ny antontan’isa dia voalaza fa 2 na 3 amin’ny zaza 1000 teraka manerantany no tratr’ity “Pied bot” ity, izay mbola tsy voafaritra mazava ny antony mahatonga azy hatramin’izao.
Ankoatra izay dia maharitra ihany koa ny fitsaboana ka olana ho an’ireo manan-janaka ny fotoana sy ny vatsy hitsaboana ny zanany. Hatreto ihany koa dia mbola toerana 5 ihany no misy fitiliana sy fitsaboana azy ity raha ny eto Madagasikara, ankoatry ny CRMM Antsirabe.